01 | May | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Wake up ! Thidagu Sayardaw! Stop acting like wooden ladle and listen to Buddha’s teaching
May 1, 2017 drkokogyi
But the greatest problem is Thidagu Sayardaw, who used to go around the world but NEVER LEARNT. I would like to use the good teachings of lord Buddha to be like the tongue which could know the taste with evenadrop of food and not like the wooden ladle which always haveachance to stir curry. Wake up Thidagu Sayardaw, stop acting like wooden ladle and listen to Buddha’s teaching.
မဘသနဲ့ မဘသကို ကိုးကွယ်ကြသူတွေ က
အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူနည်းစုတွေကို
အနိုင်ကျင့် ဖိနှိပ်မှုတွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ပြုလုပ်လာနေတာဟာ စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနေပါပြီ……
Bama Buddhist military and its derivative organisations used to change names and sometime pretend to use another group with different names and positions but ESSENTIALLY they are the metamorphosis or evolution or just simply using ALIAS to deceive the people of Myanmar and the world
Bama Buddhist military and its derivative organisations used to change names and sometime pretend to use another group with different names and positions but ESSENTIALLY they are the metamorphosis or evolution or just simply using ALIAS to deceive the people of Myanmar and the world. Look at their successive government names…
၉၆၉ မဘသ တွေဟာ အခုမှအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး၂၀၁၂ လောက်ကတည်းကလုပ်လာခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့ ၉၆၉ ကနေ နာမည်အရမ်းကြီးလာတော့ မဘသ ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ်။အခုတော့ အမည်ကွဲ လက်ဝေခံအဖွဲ့တွေအများကြီးဖွဲ့ပစ်လိုက်တယ်။
သာကေတ ကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ အပေါ်မှာ မွတ်စလင်တွေ နိုင်တယ်…… (ဒါပေမဲ့ ဒီအနိုင်ကို ဆက်ပြီးကယ်ရီလုပ်သွားဖို့တော့ လိုတယ်…)
သာကေတ ကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ အပေါ်မှာ မွတ်စလင်တွေ နိုင်တယ်……
(ဒါပေမဲ့ ဒီအနိုင်ကို ဆက်ပြီးကယ်ရီလုပ်သွားဖို့တော့ လိုတယ်…)
မွတ်စလင်တွေနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဘယ်သူတွေရှုံးသလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်..
တွေအကြောင်းကတော့ ထဲ့ပြောမနေနဲ့တော့….နောက်ဆို သူတို့ ဆွမ်းတွေ
ကွမ်းတွေတောင် လှူတဲ့သူရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး…..
ဖွတ် ဖွတ်ခြင်းလဲ အမြီးလိမ်ပြီး စားကြသောက်ကြရင်း ခွက်ခုတ်သံတွေ ကြား
ဖေ့စ်ဘုတ်လောကမှာ ဆဲနည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ အဆဲဝါသနာပါသူတွေလဲ အောတိုက် အဓမ္မများလှပါတယ်။ ဆဲဆိုခြင်းဆိုတာ ဖရုဿဝါစာပါ။ ဝစီဒုစရိုက်လေးပါးထဲက တပါးပေါ့
ဖေ့စ်ဘုတ်လောကမှာ ဆဲနည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ အဆဲဝါသနာပါသူတွေလဲ အောတိုက် အဓမ္မများလှပါတယ်။ ဆဲဆိုခြင်းဆိုတာ ဖရုဿဝါစာပါ။ ဝစီဒုစရိုက်လေးပါးထဲက တပါးပေါ့။ မုသာဝါဒါ လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်း- ပိသုဏဝါစာ
ကုန်းတိုက်ခြင်း- ဖရုဿဝါစာ ကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုခြင်း-
“ပြည်သူ့အသံ လွှတ်တော်အသံ။” ပြည်သူဆန္ဒ လွှတ်တော်
ဆန္ဒ။” စတဲ့စကားတွေဟာ အပေါ်ယံဘန်းပြစကားသာ
ဖြစ်ရင် မုသာဝါဒကံ မြောက်ပြီး လွှတ်တော်ဟာ ‘မုသာဝါဒ
လွှတ်တော်’ လို့ ပြောင်းခေါ်ရမယ်။